Din rail အီလက်ထရောနစ်စွမ်းအင်မီတာထုတ်လုပ်သူများ - China Din rail အီလက်ထရောနစ်စွမ်းအင်မီတာပေးသွင်းသူများ, စက်ရုံ
3PHASE 4WIRE ENERGY မီတာ (IC ကဒ်)
၃ အဆင့် ၄ ဝါယာကြိုးကြိုတင်ပေးငွေဖြည့်စွမ်းအင်မီတာ (IC card) သည် GB / T17215.321-2008 နှင့် GB / T17215.323-2008 ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များအရကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်ပြီးထုတ်လုပ်သည့်စွမ်းအင်တိုင်းတာခြင်းထုတ်ကုန်အသစ်ဖြစ်သည်။ ဤထုတ်ကုန်သည်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်တိုင်းတာခြင်း၊ အချက်အလက်ပြုပြင်ခြင်း၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်အပြန်အလှန်လုပ်ဆောင်ခြင်းကဲ့သို့သောအကြီးစားပေါင်းစည်းထားသောဆားကစ်များနှင့် SMT နည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုသည်။
Single-phase din ရထားလမ်းလျှပ်စစ်စွမ်းအင်မီတာ (active) သည် GB / T17215.321-2008 ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များအရကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်ပြီးထုတ်လုပ်သည့်စွမ်းအင်တိုင်းတာခြင်းထုတ်ကုန်အသစ်ဖြစ်သည်။ ဤထုတ်ကုန်သည်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်တိုင်းတာခြင်း၊ အချက်အလက်ပြုပြင်ခြင်း၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်အပြန်အလှန်လုပ်ဆောင်ခြင်းကဲ့သို့သောအကြီးစားပေါင်းစည်းထားသောဆားကစ်များနှင့် SMT နည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုသည်။
Single-phase din ရထားလမ်းလျှပ်စစ်စွမ်းအင်မီတာ (ဝေးလံခေါင်ဖျား) သည် GB / T17215.321-2008. နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များအရကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်ပြီးထုတ်လုပ်သည့်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်တိုင်းတာခြင်းထုတ်ကုန်အသစ်ဖြစ်သည်။ ဤထုတ်ကုန်သည်ကြီးမားသောပေါင်းစည်းထားသောဆားကစ်များနှင့် SMT ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်များကိုအသုံးပြုသည်။ ထိုကဲ့သို့သောလျှပ်စစ်စွမ်းအင်တိုင်းတာခြင်း, အချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့, real-time စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်အပြန်အလှန်အဖြစ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတူ။
Single-phase din ရထားလမ်းလျှပ်စစ်စွမ်းအင်မီတာ (IC card) သည် GB / T17215.321-2008. ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များအရကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်ပြီးထုတ်လုပ်သည့်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်တိုင်းတာခြင်းထုတ်ကုန်အသစ်ဖြစ်သည်။ ဤထုတ်ကုန်သည်အကြီးစားပေါင်းစည်းထားသောဆားကစ်များနှင့် SMT ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်များကိုအသုံးပြုသည်။ ထိုကဲ့သို့သောလျှပ်စစ်စွမ်းအင်တိုင်းတာခြင်း, အချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့, real-time စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်အပြန်အလှန်အဖြစ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတူ။
တစ် ဦး တည်းအဆင့် DIN ရထားလမ်းစွမ်းအင်မီတာ （အဆောင်,
Single-phase din ရထားလမ်းလျှပ်စစ်စွမ်းအင်မီတာ (အဆောင်) သည် GB / T17215.321-2008. ၏နည်းပညာသတ်မှတ်ချက်များအရကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်ပြီးထုတ်လုပ်သည့်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်တိုင်းတာခြင်းထုတ်ကုန်အသစ်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောလျှပ်စစ်စွမ်းအင်တိုင်းတာခြင်း, အချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့, real-time စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်အပြန်အလှန်အဖြစ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတူ။
3PHASE 4WIRE စွမ်းအင်မီတာ (ဝေးလံခေါင်သီ)
၃ အဆင့် ၄ ဝါယာကြိုးစွမ်းအင်မီတာ (ဝေးလံခေါင်ဖျား) သည် GB / T17215.321-2008 နှင့် GB / T17215.323-2008 ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များအရကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်ပြီးထုတ်လုပ်သည့်စွမ်းအင်တိုင်းတာခြင်းထုတ်ကုန်အသစ်ဖြစ်သည်။ ဤထုတ်ကုန်သည်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်တိုင်းတာခြင်း၊ အချက်အလက်ပြုပြင်ခြင်း၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်အပြန်အလှန်လုပ်ဆောင်ခြင်းကဲ့သို့သောအကြီးစားပေါင်းစည်းထားသောဆားကစ်များနှင့် SMT နည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုသည်။